Lahatsary: ​​Torolàlana ho an'ny Marketer ho an'ny Pinterest | Martech Zone
Alakamisy, May 10, 2012 Asabotsy 4 Febroary 2017 Douglas Karr
Tiako ny infografika, noho izany rehefa mahita sary an-tsary mahafinaritra aho dia vao mainka mandeha ara-potoana. Pinterest mitombo hatrany eo amin'ny sehatry ny fizarana ara-tsosialy noho ny hatsarany amin'ny fahitana, fizarana tsotra ary fanamorana ny fampiasana. Izahay mitazona a Marketing Infographics midira ao izay malaza be ary mitondra fifamoivoizana be dia be miverina amin'ny tranokalanay. Indraindray, ny Pinterest dia iray amin'ireo mpandika hafatra matanjaka indrindra amin'ny fifamoivoizana. Nanamarika ireo orinasa ary mampiasa Pinterest hanitarana ny tratrany.
Kudos ho an'ny MDG Advertising amin'ny sary an-tsary mahafinaritra.
Tags: hitarikatorolàlana ho an'ny pinterestPinterestpinterest mpitari-dalanahoronantsary pinterest
Lahatsary: ​​ny paikadim-pitadiavana eo an-toerana dia lakilen'ny marika lehibe